10 Iimfundiso Ezizimeleyo Zifuna Abazali Bazi
Izikolo Ezifuna Ukuzi
Nazi iinyaniso ezili-10 malunga nezikolo ezizimeleyo apho izikolo zifuna ukuba abazali bazi. Ukuba ucinga ukuthumela umntwana wakho kwisikolo sabucala, le nkcukacha kunye nolwazi luya kuphendula eminye imibuzo ebalulekileyo.
1. Izikolo ezizimeleyo zifundisa malunga nabafundi abayizigidi ezi-5.5.
NgokweZiko leSizwe leeNkcukacha zeMfundo, kwakukho izikolo ezizimeleyo ezingama-33,600 e-US ngo-2013-2014. Ababini, bakhonze abafundi abayizigidi ezi-5.5 kumabakala ngaphambi kohlobo lwe-kindergarten nge-12 kunye ne-postgraduate year.
Leyo malunga ne-10% yabafundi kweli lizwe. Izikolo ezizimeleyo zihlanganisa yonke imfuno kunye neemfuno onokuzicingela. Ukongezelela kwizikolo eziphambili zekholeji, kukho izikolo ezidinga iimfuno ezizodwa, izikolo ezigxilwe ezemidlalo, izikolo zezobugcisa, izikolo zempi, izikolo zonqulo, izikolo zaseMontessori kunye nezikolo zaseWaldorf . Izigidi zezikolo zijolise esikolweni esiphakamileyo kwaye zinike iikholeji zeekholeji. Izikolo ezimalunga ne-350 zihlala kwizikolo zokuhlala.
2. Izikolo ezizimeleyo zinika indawo ephakamileyo yokufunda.
Kupholile ukuba uhlakaniphe kwisikolo sabucala. Ugxininiso kwiikholeji ezininzi zeekholeji zikulungele ukufundela iikholeji. Izifundo zokuPasa eziPhambili zihanjiswa ezikolweni ezininzi. Uya kufumana iinkqubo ze-IB kwizikolo ezingama- 40 . Iikhosi ze-AP ne-IB zifuna abaqeqeshi abaqeqeshekileyo nabaqeqeshiweyo. Ezi pherityhulam zifuna iikholeji zezinga leekholeji ezivumela abafundi abanamanani aphezulu kwiimviwo zokugqibela ukuba badumise izifundo zezifundo ezininzi kwizifundo ezininzi.
3. Izikolo ezizimeleyo zibandakanya imisebenzi yangaphandle kunye nemidlalo njengenxalenye yeenkqubo zazo.
Uninzi lwezikolo ezizimeleyo zinikeza ezininzi iinkqubo zengqesho. Ubugcisa obubonakalayo kunye nobuchule obusebenzayo, iiklabhu zazo zonke iintlobo, amaqela anomdla kunye nenkonzo yoluntu yileminye yemisebenzi yecandelo elongezelelweyo oya kulifumana kwizikolo ezizimeleyo.
Imisebenzi yangexesha elongezelelweyo izalisekisa imfundiso yezifundo zezizathu zokuba izikolo zibagxininise. Ayikho into eyongezelelweyo.
Iiprogram zezemidlalo zidibanisa nomsebenzi wemfundo kunye nemisebenzi yecandelo elongezelelweyo ukuphuhlisa umntwana wonke. Uninzi lwezikolo ezizimeleyo zifuna ukuba abafundi babo bathathe inxaxheba kwimidlalo ethile. Ootitshala nabo kufuneka bahlanganyele ekuqeqesheni imidlalo. Ngenxa yokuba imisebenzi yezemidlalo kunye nemisebenzi yecandelo elithile liyingxenye ebalulekileyo yeprogram yesikolo yabucala, awunakuboni ukucima kule mimandla njengoko sibonile kwizikolo zikarhulumente xa uhlahlo lwabiwo mali luqina.
4. Izikolo ezizimeleyo zibonelela ngongamela rhoqo kwaye zinemigaqo-nkqubo yokunyamezela.
Enye yezinto ezikhangayo zokuthumela umntwana wakho kwisikolo sabucala kukuba akakwazi ukuwela kwiintluko. Akasoze abe yinombolo kwisikolo sabucala. Akayi kukwazi ukufihla emva kweklasi. Enyanisweni, izikolo ezininzi zisebenzisa iifom yeengxoxo zohlobo lwe-Harkness yokufundisa eklasini. Abafundi abayi-15 abahleli ngeenxa yokutya kufuneka babandakanye kwiingxoxo. Izibonda kwizikolo zokubhankana ziqhelekileyo zisebenza ngendlela yesapho kunye nelungu lezakhono ukuba ngumzali onguzali. Omnye umntu uhlala ejikeleza ukugcina iliso elisoloko lijongene nezinto.
Enye impawu yezikolo ezizimeleyo kukuba ininzi inomgaqo-nkqubo wokunyamezela xa kufikelelwe kwiziphene ezinkulu zeemigaqo kunye neendlela zokuziphatha.
Ukusetyenziswa kakubi kweziyobisi, ukukhwabanisa , ukukopela nokuxhatshazwa yimizekelo yemisebenzi engavumelekanga. Isiphumo sokunyamezela ngokukodwa kukuba unokuqiniseka ukuba ubeka abantwana bakho kwindawo ephephile. Ewe, uya kuhlola kodwa uya kuqonda ukuba kukho imiphumo emibi yokuziphatha okungavumelekanga.
5. Izikolo ezizimeleyo zibonelela ngoncedo lwezemali.
Uncedo lwemali luyinkokhelo enkulu ezikolweni ezininzi. Ngamaxesha anzima kwezoqoqosho, izikolo ziye zenza uncedo kwiintsapho ezifuna ukuthumela abantwana babo kwisikolo sabucala kwindawo ephambili ebhajethi. Izikolo eziliqela zinikezela ngemfundo ekhululekile xa ufumana izikhokelo ezithile zengeniso. Njalo ubuze isikolo malunga noncedo lwezemali.
6. Izikolo ezizimeleyo zihlukeneyo.
Izikolo ezizimeleyo zafumana impatho embi ekuqaleni kwenkulungwane ye-20 njengezizathu zokuzikhethela kunye ne-elitism.
Amaqhinga okungafani aqala ukubamba kuma-1980s nakwa-1990. Izikolo ngoku zifuna ngokukhawuleza abaviwa abafanelekileyo ngaphandle kweemeko zentlalo. Imithetho eyahlukileyo kwizikolo ezizimeleyo.
7. Ubomi bezikolo ezizimeleyo bububuke ubomi bentsapho.
Uninzi lwezikolo luququzelela abafundi babo kwiqela okanye izindlu . Ezi zindlu zikhuphisana kunye kwazo zonke iintlobo zezinto ngaphandle kwemisebenzi eqhelekileyo yemidlalo. Izidlo zoLuntu ziyinxalenye yezikolo ezininzi. Ootitshala bahlala nabafundi bezokhupha izibophelelo ezincinci eziyimfuneko ebalulekileyo kwimfundo yabucala.
8. Ootitshala bezikolo ezizimeleyo bafanelekile.
Izikolo ezizimeleyo zixabisa ootitshala abaneegriki kwisifundo sabo esikhethiweyo. Ngokuqhelekileyo ama-60 ukuya kuma-80% ootitshala bezikolo ezizimeleyo baya kuba nedanga eliphezulu. Uninzi lwezikolo zifuna ukuba ootitshala babo bafumane ilayisenisi yokufundisa.
Uninzi lwezikolo ezizimeleyo zinama-2 semesters okanye imigangatho kunyaka wabo wezifundo. Iinqununu ezininzi zezikolo zenza i- PG okanye i-post-graduate year. Ezinye izikolo nazo zinika iinkqubo zokufunda kwamanye amazwe njengeFransi, iItali neSpain.
9. Ubuncinci bezikolweni ezizimeleyo zivumela ukuba uninzi lwabantu.
Iikholeji ezininzi zeekholeji zibafundi abangama-300-400. Ubukhulu obu buncinci buvumela abafundi ukuba banake ingqalelo. Imigangatho yeklasini kunye nesayizi yesikolo kwimfundo, kuba kubalulekile ukuba umntwana wakho angawa phantsi kwemichilo kwaye ibe yinto nje. Ubukhulu beeklasi ezincinane kunye nama-rat-rating-teacher-12: 1 aqhelekileyo.
Izikolo ezininzi ziquka i-prekindergarten ngebanga le-12.
Uya kufumana ukuba ngokwenene iqukethe izikolo ezi-3 ezincinci. Ngokomzekelo, baya kuba nesikolo esiphantsi, isikolo esiphakathi kunye nesikolo esiphakamileyo. Ngamanye ala mahlulo uya kuba nama-300-400 abafundi kwiimfundo ezine okanye ezihlanu. Ingqwalasela yomuntu yinto ebalulekileyo yintoni ohlawula ngayo.
Izikolo ezizimeleyo zizinzileyo.
Izikolo ezizimeleyo ezongezelelweyo zenza iikhampasi kunye neenkqubo ezizinzileyo. Akuzange kube lula kwezinye izikolo ngenxa yokuba zinezakhiwo ezithe zadala ezingenamandla. Abafundi kwizikolo ezizimeleyo nakwiindawo zokutya zokutya kwenkunkuma kunye nokwanda kwemifuno yabo. Ii-offset zeCarbon ziyinxalenye yemigudu yokuzinza. Ukugcinwa kokuqhubekayo kufundisa uxanduva kuluntu jikelele kuluntu.
6 LEGO Ninjago Imidlalo Yeyona epholileyo
Impembelelo yaseMexico: I-Biography yasePancho Villa
'Gracias' namanye amagama athi 'Siyabonga'
Imisebenzi ephezulu ye-10 'yama-80' kunye namaGama oGama
UGuilume Utshele (UWilliam Utshilo) I-Synopsis
Ukuguqulwa kweMerika: iMfazwe yaseQuebec
Ithini IBhayibhile Ngokudumba?
I-Funny Barack Obama Memes neMifanekiso